မင်္ဂလာမဆောင်ခင်က စိတ်ကူးထားသလိုနဲ့ အခုလက်ရှိနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အကြောင်းကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ အောင်မြင့်မြတ် – Cele Top Stars
မင်္ဂလာမဆောင်ခင်က စိတ်ကူးထားသလိုနဲ့ အခုလက်ရှိနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အကြောင်းကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်
December 21, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရုပ် ဇာတ်ကားထဲက သိန်းစိုးဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင့်မြတ် ကတေ့ာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှု့ကိုအခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင့်မြတ်က ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်က ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီး လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရောက်ရှိနေ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်ကတော့သူချစ်ရတဲ့ ဇနီးလေးနဲ့ မနှစ်က ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၁) နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….။
မင်္ဂလာမဆောင်ခင်က စိတ်ကူးထား သလို ဖြစ်မလာဘဲ အခုလက်ရှိနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ အောင်မြင့်မြတ်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် လုံးက တောထဲရောက်နေကြတဲ့ ပုံလေးကို တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုပြီး ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ လောကကြီးမှာ နောင်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ နှစ်နှစ်ပြည့် သုံးနှစ်ပြည့် Anniversary တွေကျရင်ရောဘယ်လိုပုံတွေတင်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး ရင်ခုန်နေကြပါသေးတယ်။ သူချစ်ရတဲ့ ဇနီးလေးက သူ့ကိုဘာမှမပြောတဲ့အပြင် သူ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်လာဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ” 20.12.20 မှာ မင်္ဂလာဆောင်တယ်..မညားခင်တော့ ညားပြီးရင်ဘယ်လိုထားမယ် ညာလိုထားမယ်ဟိုဟာ ဝယ်ပေးမယ် ဒီဟာဝယ်ပေးမယ် ပေါ့..ဒီနေ့ 20.12.21 မှာ တစ်နှစ်လဲပြည့်ရော ဘောလုံးဘောင်းဘီနဲ့ တောထဲရောက်နေကြပြီ 😅😅😅သူကလဲ ဘာမှမပြောပါဘူးကောက်ကောက်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်လာတာပါပဲ…..။
မင်္ဂလာပွဲက ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတောင် စုံအောင်မတင်လိုက်ရပါဘူး မကျေနပ်ချက်တွေ နာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ထွက်လာကြတာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာတောင် တစ်နှစ်ပြည့်သွားပါရော…နောက်ပိုင်း နှစ်နှစ်ပြည့် သုံးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်တွေကျရင်တော့ ဘယ်လိုပုံတွေတင်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး ရင်ခုန်မိပါသေးတယ် …. ” ဆ်ိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကလည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ဂုဏ်ယူနေကြပြီး ဘေးကင်းဖို့ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….။
Source : Aung Myint Myat
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ ဥပါယျတံမဉျြရုပျရုပျ ဇာတျကားထဲက သိနျးစိုးဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျထဲကို စတငျရောကျရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျ့မွတျ ကတေ့ာ ပရိတျသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှု့ကိုအခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျ့မွတျက ပွညျသူတှနေဲ့အတူ အမှနျတရားဘကျက ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရပျတညျခဲ့တာကွောငျ့ စဈကောငျစီဘကျကနေ ပုဒျမ ၅၀၅ (က)နဲ့တရားစှဲဆိုခံထားရပွီး လကျရှိမှာလှတျမွောကျနယျမွမှောရောကျရှိနေ တာပဲဖွဈပါတယျ။လှတျမွောကျနယျမွရေောကျရှိနတေဲ့ အောငျမွငျ့မွတျကတော့သူခဈြရတဲ့ ဇနီးလေးနဲ့ မနှဈက ဒီဇငျဘာ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ မင်ျဂလာဆောငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒီနမှေ့ာတော့ မင်ျဂလာနှဈပတျလညျ (၁) နှဈပွညျ့သှားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ….။
မင်ျဂလာမဆောငျခငျက စိတျကူးထား သလို ဖွဈမလာဘဲ အခုလကျရှိနှဈပတျလညျနလေ့ေးမှာ အောငျမွငျ့မွတျတို့ လငျမယားနှဈယောကျ လုံးက တောထဲရောကျနကွေတဲ့ ပုံလေးကို တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလာမလဲဆိုပွီး ကွိုတငျခနျ့မှနျးလို့မရတဲ့ လောကကွီးမှာ နောငျသူတို့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ နှဈနှဈပွညျ့ သုံးနှဈပွညျ့ Anniversary တှကေရြငျရောဘယျလိုပုံတှတေငျဖွဈမလဲဆိုပွီး ရငျခုနျနကွေပါသေးတယျ။ သူခဈြရတဲ့ ဇနီးလေးက သူ့ကိုဘာမှမပွောတဲ့အပွငျ သူ့နောကျကို ကောကျကောကျပါအောငျ လိုကျလာဆိုတဲ့ အကွောငျးလေးကို ” 20.12.20 မှာ မင်ျဂလာဆောငျတယျ..မညားခငျတော့ ညားပွီးရငျဘယျလိုထားမယျ ညာလိုထားမယျဟိုဟာ ဝယျပေးမယျ ဒီဟာဝယျပေးမယျ ပေါ့..ဒီနေ့ 20.12.21 မှာ တဈနှဈလဲပွညျ့ရော ဘောလုံးဘောငျးဘီနဲ့ တောထဲရောကျနကွေပွီ 😅😅😅သူကလဲ ဘာမှမပွောပါဘူးကောကျကောကျနောကျကို ကောကျကောကျပါအောငျလိုကျလာတာပါပဲ…..။
မင်ျဂလာပှဲက ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံတှတေောငျ စုံအောငျမတငျလိုကျရပါဘူး မကနြေပျခကျြတှေ နာတဲ့စိတျတှနေဲ့ ထှကျလာကွတာမင်ျဂလာဆောငျပွီးတာတောငျ တဈနှဈပွညျ့သှားပါရော…နောကျပိုငျး နှဈနှဈပွညျ့ သုံးနှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျတှကေရြငျတော့ ဘယျလိုပုံတှတေငျဖွဈမလဲဆိုပွီး ရငျခုနျမိပါသေးတယျ …. ” ဆျိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျထကျမှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှအေကုနျလုံးကလညျး သူတို့ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျလုံးအတှကျ ဂုဏျယူနကွေပွီး ဘေးကငျးဖို့ ဝိုငျးဆုတောငျးပေးနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ….။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက စားသောက်ဆိုင်ကြော်ငြာတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေဝဖန်နေကြတဲ့အပေါ် ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ နေဝင်း
Pre Wedding ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုများအပေါ် Live ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလာတဲ့ စိန်ဖြိုးနဲ့ရီရီ